शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य ओरालो लाग्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? – ramechhapkhabar.com
शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य ओरालो लाग्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ६ वटा कम्पनीको सेयर सूचिकृत भएको छ । जसमध्ये ३ कम्पनीको साधारण सेयर (आइपिओ), २ वटा कम्पनीको बोनस सेयर र एउटा कम्पनीको हकप्रद सेयर रहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मङ्सिर ५ गते शुक्रबार ३ वटा कम्पनीको आइपिओ सूचिकृत भएको छ । जसअन्तर्गत विकास ऋणपत्र २०८६ ‘घ’ को २० करोड कित्ता, विकास ऋणपत्र २०८४ ‘घ’ को १० करोड कित्ता, विकास ऋणपत्र २०८७ ‘घ’ को २० करोड आइपिओ नेप्सेमा सुचिकृत भएको हो ।
त्यस्तै मङ्सिर ८ गते सोमबार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको २ लाख १८ हजार ७ सय ८६ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ ।
स्टकका अनुसार मङ्सिर ९ गते मंगलबार सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ११ लाख ४१ हजार १ सय ४० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत गरिएको छ ।
त्यसैगरी आज (मङ्सिर १२ गते शुक्रबार) नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ५ लाख ९६ हजार ४ सय ७० दशमलव ५ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो ।